Umshayeli we-excavator: imininingwane yomsebenzi
Abafana abaningi ebuntwaneni babo bathakazelisa umsebenzi wokubukela futhi bathuthukisa ukwakhiwa noma imishini yempi. Ubuciko obuhle nobukhulu obonakalayo buyathandeka ngisho nasebusheni obuqinile. Kodwa-ke, insizwa eningi ayiyeki ukuphupha mayelana nemishini ejulile enamandla lapho sekuyisikhathi sokucabanga ngokukhetha umsebenzi. Yini umqhubi we-excavator akwenzayo futhi yimuphi umsebenzi onguchwepheshe?
Ungathola kanjani lokhu okukhethekile?
Ukuze usebenze njengomkhandi we-excavator, kubalulekile ukuba ube nemfundo ekhethekile yezemfundo ephakeme. Abantu abaye baphumelela ekolishi ngokukhethekile okuhlobene nabo bangathatha izifundo zokuqeqesha eziqhubekayo ezihlala izinyanga ezimbalwa. Ngokuqondene nokukhula komsebenzi, kuhlale kunethemba. Umqhubi we-excavator angaba nezindawo ezine-4 kuya kwezingu-6. Kubuye kube njalo ukuthi abavubi abanolwazi oluningi emva kokunye ukuqeqeshwa kweziqu (ngezifundo ezikhethekile) bahlelwa kalula yizimboni. Ungazama futhi ukuthola umsebenzi emkhakheni wokuthuthukiswa nokukhiqizwa kwemishini yokwakha, kodwa lokhu kuyisifiso sokuba nemfundo ephakeme yeprofayili, engatholakala ngaphandle kokusebenza ngesikhathi sokusebenza.
Akunzima ukuqagela ukuthi umqhubi we-excavator ulawula imishini ehamba emhlabeni. Kodwa lokhu akupheli imisebenzi yakhe. Ukugcinwa kwesikhashana kanye nokulungiswa okuncane, uma umculi engekho ngaphansi kwewaranti yomkhiqizi, futhi umthwalo womshayeli. Kubalulekile ukuqonda ukuthi umsebenzi onomthwalo wokwakha onzima uhlotshaniswa nezingozi ezinkulu kanye nomthwalo wemfanelo omkhulu. Umfuli akanayo ilungelo lokwenza amaphutha, kufanele akhumbule ngokugcwele imithetho yokuphepha, akwazi ukubona ngokucacile amabanga phakathi kwezinto ezinembile kakhulu futhi aphendule kahle. Lo msebenzi uhloswe kubantu abanesimo esiphezulu se-psyche, njengokuthi kunoma yisiphi isimo esiphuthumayo ubukhulu bemiphumela buxhomeke kakhulu ekutheni ngokushesha umpaki uzodinga isikhathi sokusabela kanjani. Ukuqala umsebenzi kumuntu oqeqeshwe ngezikhungo ezikhethekile ezidingekayo okudingekayo kusukela ekuthunyelwe "umsizi womkhandi we- excavator". Ukuqeqeshwa okunjalo kudingekile: ngisho noma umfundi efunde ngokucophelela, okuningi mayelana namasu kanye nemisebenzi yomsebenzi okufanele afunde ngokusebenzayo kuphela.
Ingabe kunenzuzo ukusebenza kule nsimu?
Izinga lomholo lihluka kuye ngokuthi yikuphi umsebenzi nomkhakha wesifunda. Izibalo ezilinganiselwe zesifundazwe - kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-25. Kodwa enhloko-dolobha, lochwepheshe onjalo uzothola kakade ama-ruble angama-50-60 000 futhi lokhu kuphela umholo ovamile , ngokuvamile ngokuvamile ama-ruble ayizinkulungwane eziyi-100 athola umshayeli we-excavator. I-Moscow idolobha elinamathuba amakhulu namanani aphezulu, ngakho-ke lo mmahluko awumangalisi. Ukuthakazelisa lo msebenzi ububanzi bemagrafu, ungathola kalula isithuba esinomhlahlandlela ojwayelekile womsebenzi / izinsuku ezivuliwe - 2/2. Akunzima ukuthola umsebenzi ngeshintsho, kanti nezinye izinkampani nazo zenza umsebenzi wokushona ebusuku. Kodwa ungacabangi ukuthi umqhubi we-excavator uyinto elula. Izimo zokusebenza azikwazi ukubizwa ngokuthi zikhululekile ngisho nokuphathwa kwemishini yanamuhla. Noma kunjalo, lokhu kuyindaba yokunambitheka futhi, mhlawumbe, kukhona uhlobo oluthile lokuthandana kuyo.
Izinto eziyingozi zamakhemikhali: umqondo, ukuhlukaniswa kanye nezici
"I-Albatross" (L-39) iyindiza yephupho